Buddhism Archives - Page7of9- Thutazone
မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန) (Photos : အဖြူရောင် နှလုံးသား ) အင်္ဂပူသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၊ ဟင်္သာတ ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့ငယ်လေးဖြစ်သည်။ထို့အတူပင် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့ သည့် ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် မွန်ဘုရင် သုရှင်တကာရွတ်ပိ တပ်ဆုတ်ခဲ့ပြီး ကွယ်...
Post By လင်းအိမ်တော် နတ်ဟူသည် မြန်မာစကား“နာထ”ဟူသော ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသည် ဟု ဝေါဟာရလိနတ္တဒီပနီကျမ်းက ဖွင့်ဆိုထားသည်။ နာထ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်။ လောကီ၊ လောကုတ္တရာအကျိုးတို့အတွက် လူသားတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောကြောင့် “နာထ”၊“နာတ်”၊“နတ်”ဟု ခေါ်ဆိုနေကြသည်။ နတ်ကို ပါဠိဘာသာအားဖြင့်...
ငရဲကိုပါဠိဝေါဟာရအားဖြင့် နိရယ ဟုခေါ်သည်။ နိ+အယ၊ နိ-မရှိသောကင်းသော+အယ-ချမ်းသာ။ ထိုနိရာယဟူသည့် ပါဠိကို မြန်မာအသံ သို့ပြောင်းသည့်အခါ နိရာယ်=နိရဲဟုဖြစ်လာသည်။ နိရဲမှ နရဲဖြစ်လာပြီးနောက်တွင် နငယ်ကိုအက္ခရာဖြင့် အသံဖလှယ်လိုက်သည့်အခါ နရဲမှငရဲဖြစ်လာတော့သည်။ထို့ကြောင့်နိရယမှအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသော ငရဲဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကား ချမ်းသာကင်းသော ဘုံဘဝဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ထိုငရဲဘုံတွင်...
Written By Venerable Ghosaka ၁) 'ဟေ ! ဇောတိက ... မင်းတပည့်တွေနဲ့ ငါကို စစ်ထိုးခိုင်းပြီး မင်းက ဘုရားကျောင်းမှာ ရှောင်တိမ်းနေတာပေါ့ ဟုတ်လား' 'မင်းကြီး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကျနော်မျိုးနားမလည်ပါ' 'မင့်...
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဆင်းတုတော် ၁၀ ခု
ရေးသားသူ - မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန) ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် ကိုးကွယ်မှု အများဆုံးဘာသာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ မူလအရင်း အမြစ်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသဖြစ်သည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သာကီနွယ်ဝင်မင်းသားပျို သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမသည် ဘုရား အဖြစ်သို့ရောက်တော်မူချိန်မှစ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်အာရှတိုက်နှင့် ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့သို့...
(Unicode) ရေးသားသူ - ဘသန်းတင် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိက လမ်းမကြီးများ ဖြစ်သဖြင့် လူတိုင်းသိသော်လည်း ဆူးလေ ဘုရားလမ်းနှင့် တစ်ဆက်တည်း ရှိနေသော အလံပြ ဘုရားလမ်းကို လူတိုင်းမသိပါ။...